गुल्मीमा बाम गठबन्धनबाट एमालेका ज्ञवाली र विष्ट तथा काँग्रेसबाट भण्डारी र केसी भीड्ने ! – ebaglung.com
गुल्मीमा बाम गठबन्धनबाट एमालेका ज्ञवाली र विष्ट तथा काँग्रेसबाट भण्डारी र केसी भीड्ने !
२०७४ कार्तिक १५, बुधबार १४:५२	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँ शक्तिले पनि उमेदवारको टुंगो लगायो ! प्रचण्डका ज्वाँई छुटे !
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ कात्तिक १५ । ५ नम्वर प्रदेश अन्तरगत दोश्रो चरणमा हुने प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि गुल्मीमा बाम गठबन्धन सहित सवै दलले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएका छन् । दुई निर्वाचन क्षेत्र र चार वटा प्रदेश रहेको गुल्मीमा वाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका सचिवव्दयः प्रदिपकुमार ज्ञवाली र गोकर्णराज विष्ट क्रमश क्षेत्र नम्वर १ तथा २ बाट उमेदवारी दिने भएका छन् ।
उनिहरुका प्रतिष्पर्धीका रुपमा नेपाली कांग्रेसले १ नम्वर क्षेत्रबाट चन्द्र भण्डारी र २ बाट चन्द्र केसीलाई उमेदवार खडा गरेको छ । गुल्मीमा बाम गठबन्धनबाट २ वटै प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार र २ वटा प्रदेश सभा एमाले पाउने भएको छ भने माओवादीले २ वटा प्रदेश सभा पाउने गरी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
क्षेत्र नम्वर १ को ‘क’ प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका सुर्दशन बराल र ‘ख’ प्रदेशमा एमालेबाट कमलराज श्रेष्ठ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । प्रदेश सभामा सिफारिस भएका यी दुवै जना जना पूर्व संसद र प्रभावशाली नेता हुन् । गठबन्धनबाट क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा तर्फ एमालेबाट खड्ग केसी र माओवादीबाट दिनेश पन्थी सिफारिस भएको बाम गठबन्धनले जनाएको छ ।
मंगलबार साँझ सम्म आशावादी रहेका प्रचण्डका ज्वाईचेला माओवादी केन्द्रका बुद्धि जिसी उमेदवार हुनबाट छुटेका छन् । प्रतिनिधी सभा उमे्दवारमा सिफारिस भएका उनी एमाले संगको बाँडफाँडमा दुवै प्रतिनिधी सभाको उमेदवार एमालेले लिएमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधी सभाको उमेदवार स्वतः प्रदेशको पाउने केन्द्रले नीति बनाएको भन्दै त्यही नीति अनुसार आफुले टिकट पाउने कुरामा आशावादी थिए । तर, माओवादी केन्द्रले पाएको ४ नम्वर प्रदेशमा सुरु देखि नै सिफारिस भएका दिनेश पन्थीलाई केन्द्रले उमेदवारको अन्तिम टुङ्गो लगाएर पठाएको सो पार्टीका पोलिट्व्युरो सदस्य सुदर्शन बरालले बताए ।
जिसी जस्तै कांग्रेसका जिल्ला सचिव खिलध्वज पन्थी उमेदवारका लागि सुरु देखि चर्चाका पात्र थिए । उनि पनि अन्तिममा आएर छुटेका छन् । कांग्रेसबाटै रुद्रमणि शर्मा भण्डारी, महेन्द्र भण्डारी, प्रेमनारायण भण्डारी श्रीप्रसाद भलामी लगायतका सुरु देखि चर्चामा रहेपनि अन्तिममा उनिहरुपनि पाखा परे ।
काँग्रेसका उम्मेदवार जिताउन तरुणदलले बनायो यस्तो रणनीति